Barcelona Oo Kalsooni Ku Qabta In Ay La Soo Saxiixan Doonto Laba Ka Mid Ah Saddexdan Bartilmaameed Ee Kala Ah Paul Pogba, Frenkie De Jong Iyo Adrien Rabiot. – GOOL24.NET
Barcelona Oo Kalsooni Ku Qabta In Ay La Soo Saxiixan Doonto Laba Ka Mid Ah Saddexdan Bartilmaameed Ee Kala Ah Paul Pogba, Frenkie De Jong Iyo Adrien Rabiot.
August 29, 2018 Mahamoud Batalaale
Maamulka kooxda Barcelona ayaa kalsooni ku qaba in ay la soo saxiixan doonaan laba ka mid ah saddexda xidig ee bartilmaameedka muhiimka ah u ahaa ee kala ah Paul Pogba, Frenkie De Jong iyo Adrien Rabiot iyada oo raadinaysa qorshayaashii ay xidigan kula soo saxiixan lahayd. Maamulka kooxda Barca ayaa u muuqda in suuqa xagaagani uu xidhmi doono iyaga oo aan saddexdan xidig midna la soo wareegin.
Laakiin waxay kalsooni ku qabaan in ay suuqdayada soo socda ay la soo wareegi doonaan laba ka mid ah Paul Pogba, Frenkie De Jong Iyo Adrien Rabiot iyada oo waliba suuqa bisha January uu noqon doono kan ugu soo horeeya ee ay maamulka Camp Nou isku dayi doonaan in ay hawlglan fuliyaan.
Barcelona ayaa intii uu suuqa xagaagani furnaa isku dayday in ay la soo wareegto saddexda xidig khad dhexe ee kala ah Paul Pogba, Frenkie De Jong iyo Adrien Rabiot laakiin ilaa hadda iyaga oo suuqa xagaaga ee Spain uu dhawaan soo xidhmi doono waxay maamulka Barca awoodi waayeen in ay keenaan xidigahan Camp Nou.
Wargayska Sport ee magaalada Barcelona ka soo baxa ayaa shaaciyay in kooxda Barcelona ay kalsooni ku qabto in ay suuqyada kala iibsiga ciyaartoyda ee soo socda la soo saxiixan doonto laba ka mid ah Paul Pogba, Frenkie De Jong Iyo Adrien Rabiot.
Laakiin Barcelona ayaan wali ka quusan in ay maalinta suuqa kala iibsiga ugu danbaysa dhamaystiri karto saxiixa xidiga ree France iyo kooxda PSG ee Adrien Rabiot iyada oo waliba warbixintan lagu sheegay in kooxda PSG ay go’aan ka gaadhi doonto xaalada Adrien Rabiot maalinta uu suuqa kala iibsigu xidhmayo.
Barca ayaa si xoogan iskugu dayday in ay hesho adeega Adrien Rabiot isaga oo waliba qalbiga gashaday in uu Camp Nou ka ciyaaro taas oo keentay in uu diiday shan dalab heshiis cusub oo ay kooxdiisa PSG u soo bandhigtay taas oo maamulka PSG ku qasbaysa in ay go’aan ka gaadhaan.
Barcelona ayaa wali isha ku haysa in Adrien Rabiot ay maalmaha soo socda la soo saxiixato balse haddii kale waxay sugi doontaa bisha January si la mid ah Paul Pogba oo ay hadda isaga xagaagan ka quus ka taagan tahay.
Ugu danbayn Barcelona ayaa doonaysa in ay la soo saxiixato xidiga ay sida wayn ula socotay ee Frenkie De Jong kaas oo horumar wayn ku samaynaya kooxdiisa Ajax oo u soo baxay heerka Groupyada Champions League laakiin waxay sugaysaa ilaa suuqyada soo socda si ay xidigan oo isna si wayn u doonaya Barca ay la soo wareegto.